Abanarcissists | Eyenkanga 2021
Kutheni le nto ii-Empaths kunye ne-Narcissists ziphela kubudlelwane?
Kutheni le nto ii-empaths kunye ne-narcissist zitsalela omnye komnye kwaye ziphele kubudlelwane? Eli nqaku lijongeka nzulu kwizizathu zengqondo.
Izinto ezi-8 eziBalulekileyo ekuBuyiseni kwiNarcissistic Abuse
Ukucinga ukuba uza kuphila njani ekuphathweni gadalala? Nazi izinto ezi-8 KUFUNEKA UZENZE ukuba ufuna ukuqhubeka, uphilise kubudlelwane bakho, kwaye uphumelele.
Iindlela zokukopa zeNarcissist
Bonke abakhohlisi be-narcissists? Kutheni besenza oko? Ungazi njani ukuba umntu uyakopa? Ngaba ufanele uthethe nawo? Siyiphendula le mibuzo nangaphezulu.
Unxibelelana njani ngokufanelekileyo emva kobudlelwane bobuNarcissistic
Ngaba uyasokola ukunxibelelana ngokufanelekileyo ukusukela ubudlelwane bakho bokuhlukumeza busezandleni zomntu othanda ukuba narcissist? Funda indlela yokuphinda ufunde ezi zakhono.
9 Iimvakalelo zokuba abaNarcissist bafuna ukuKwenza kumaXhoba abo
Njengenxalenye yokuphathwa gadalala, ukuphathwa gadalala bafuna ukuba amaxhoba abo azive izinto ezithile. Nazi iimvakalelo ezili-9 abafuna ukuzenza engqondweni yakho.
Ungamenzakalisa Njani uNarcissist Njengokuba Bakuvisa kabuhlungu
Ke ufuna ukuziphindezela kwi-narcissist. Ufuna ukubenzakalisa, ukubaphula, ubenze babandezeleke. Ungakwenza njani oku ngelixa ugcina ingqondo yakho iphilile? Ungazijika njani iitafile kwaye uzenze lusizi? Impendulo isenokungabi yile ucinga ngayo.
Njani abantwana abaDala boomama abaNarcissistic abanokukuthintela ukuwa ngokweemvakalelo Olu suku lukaMama
Kubantwana boomama abathandanayo, umbhiyozo wonyaka woSuku loMama kunokuba lixesha elinzima kakhulu lokujamelana neemvakalelo. Endaweni yokubandezeleka kakhulu, sebenzisa ezinye zezi ndlela zokujongana nemiceli mngeni kunye nokusebenza kwengqondo onokuthi ujongane nako.
Iimpawu ze-12 Ujongana neNarcissist enobungozi
Kwisiphelo esibi ngakumbi sesibonakaliso se-narcissistic yi-narcissist enobungozi. Ezi ziindidi zabantu ezinokonakalisa ubomi, kwaye zithintelwe ngcono. Nazi iimpawu ezili-12 onokujonga kuzo ukukunceda ubone enye xa udibana nabo.
Izinto ezi-3 ezenziwa ziinkawu eziphaphazelayo zeNarcissist (+ Indlela yokuziKhathaza)
AbakwaNarcissists abenzi buhlungu babo bonke-bakwathatha neenkawu ezibhabhayo ukuze zibenzakalise kwaye zibasebenzele. Nantsi indlela yokubaphelisa izixhobo.
Ukukhanyisa ngegesi: Imizekelo engama-22 yale nkqubo yokulawula ngobundlobongela. Ck
Le mizekelo yokukhanyisa ngegesi ibonisa ukuba isetyenziswa njani kubudlelwane, useto losapho (umz.ngabazali), okanye emsebenzini (umzekelo, ngumphathi). Kunye neempawu zobuqu ezili-14 ekufuneka uzilumkele.
Kutheni le nto UNGALOKO UNGAZAMA Unyango lweziBini ngeNarcissist
Ukuba uyamthanda kwaye umkhathalele umntu owenza izinto ezingekho mgangathweni, kunokuba sisihendo sokuzama ukunyanga nabo njengendlela yokuphucula ubudlelwane bakho. Musa. Nasi isizathu.
Xa Umama Wakho eyiNarcissist
Ibali lobufazi kwelinye ibhinqa kunye nomama ongathandani, ukuba ekugqibeleni wakuqonda njani okwenzekileyo kuye, kunye namagama aphilisayo kwabanye.
Indlela yeGrey Rock yokujongana ne-Narcissist xa kungekho qhakamshelwano ayisiyiyo inketho
Funda ukuba ungayisebenzisa njani iGrey Rock Method ukujongana ne-narcissist ebomini bakho xa ungadibani nayo ayisiyonyani yokwenyani.
Amagama angakumbi angama-6 asuka kwiNarcissist Dictionary kufuneka ngokwenene uyazi
Maninzi amagama asetyenziswayo ukuchaza imiba yobudlelwane bobuhlobo obuthile; Nazi ezi-6 zokuziqhelanisa nazo.
Iimpawu ze-6 oJongene ne-Narcissist eModareyitha (kodwa ke uyiNarcissist)
I-Narcissism sisiphazamiso esibonakalayo esithetha ukuba kukho into enje ngokuba 'ngumodareyitha' we-narcissist. Le miqondiso mithandathu iya kukunceda ubone ukuba ikhona na ebomini bakho.
ICoververt Narcissist kunye nendlela onokuthi ungababoni ngqo
I-narcissist efihlakeleyo inokuba nzima ukuyibona ngamanye amaxesha, kodwa musa ukukhohliswa ekucingeni ukuba indlela abaziphethe ngayo ayinabungozi kwaye iyanyanzelisa.
Amaqhinga ama-6 amaNarcissist asebenzise ngokuchasene namaxhoba abo (ekufanele ukuba uyazi)
Ukuba ukhe wafumana ubuqhetseba be-narcissist ngaphambili, unokufuna ukongeza la mabinzana kwisigama sakho ukuchaza oko wabandezeleka kuko kwabanye.
Izinto ezijijekileyo ezi-5 zeNarcissists zitsho kwaye zenze ukuba ubuye
Kanye xa ucinga ukuba ubalekile kubusuku obubi be-narcissist, ujongene namaqhinga awahlukeneyo abawasebenzisela ukukuphinda ubuyele ebomini babo.
Iimaski ezi-6 zeNarcissist (kunye nendlela yokuzibona)
I-narcissist iyakwazi ukubeka iimaski ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwiimeko kunye nenjongo / injongo yazo-nazi ezi-6 oya kuthi uzibone rhoqo.
Ukulahlekiswa ngu-Narcissist ngobuGcisa kubathintela njani ekukuthandeni
Ngaba i-narcissist iyakwazi ukuthanda? Eli nqaku liyakuphikisa ukuba abekho kwaye kukho esinye sezizathu ezibangela ukuba bangaziva.
Ngubani igama lokwenyani lika nikki bella
kuthetha ntoni nzulu kubudlelwane
imibuzo enomdla yokubuza enye ebalulekileyo
uluntu vs isihogo somngcwabo kwiseli ngokupheleleyo
indlela yokwenza ixesha libonakale lihamba ngokukhawuleza
igoldberg ibuyela kwi-wwe
Ngaba umarkiplier unentombi 2017